यस्तो पो क्षमता
राजधानीमा अहिले बिहान कालो कपडा लगाएर हिंडेको मान्छे बेलुका सेतो कपडा लगाएको अवस्थामा हुने र सेतोे लगाएर हिंडेको रातिसम्म खैरो वा कालो हुने गरेको धरहराको दूरबिनबाट देखिएको छ। हरेक घरघरमा
मति कहिले सुध्रेला
स्ववियु चुनाव सकियो। निर्वाचन परिणाम पनि आउने क्रम जारी रहेको छ। चुनावमा कसले कति क्याम्पस जित्यो। अहिले प्रतिस्प्रर्धा छ को अगाडि भनेर नेविसंघ भन्छ हामी सबैभन्दा अगाडि अनेरास्ववियु भन्छ हामी
कक्टेल र टिपेक्स
मदिरा पक्कै पनि राम्रो पदार्थ होइन। मदिरा पिउने र पिएपछि त्यसले पार्ने प्रभाव पक्कै राम्रो हुँदैन यो दुनियाँलाई थाहा नै भएको विषय हो। यसले समाजमा पार्ने प्रभाव र त्यसबाट पीडितहरूको
पत्रकार र राजनीतिज्ञ
पत्रकारिता र राजनीति एक अर्काका परिपूरक हुन् त? यो बहस लामो समयदेखि चलेकै छ। तर यसको उत्तर न पत्रकारले दिएका छन् न त राजनीतिज्ञ भनिएकाले। यसको उत्तर दिन नसकिरहेका बेला
को जाग्ने ?
देशमा युवा पुस्तालाई जिम्मेवारी दिइयो भने देशमा विद्यमान अहिलेको अराजकताको अन्त्य हुन्छ कि भन्ने अपेक्षा जनस्तरमा देख्न सकिन्छ। तर, अहिले स्ववियु निर्वाचनमा भावी नेता भनेर चिनिएका विद्यार्थी नेताहरुको पारा हेर्दाचाहिँ
हैट, देउवा दाइ
लोकतन्त्रमा जसले पनि आफ्नो अभिव्यक्ति दिन पाउने नैसर्गिक अधिकार हुन्छ यो विश्वव्यापी मान्यता हो। नेपालमा पनि लोकतन्त्रमा बढी विश्वास गर्ने पार्टी नेपाली कांग्रेस हो, यसमा दुईमत छैन। कांग्रेसजस्तो लोकतान्त्रिक पार्टी
जसको पार्टीको संगठन र नीति काम न काजको छ त्यस्तालाई अहिले निर्वाचन निल्नु न ओकल्नुभएको छ। निर्वाचनको विरोध जसले गरेका छन् तिनका पार्टीमा मान्छे हेर्यो भने अधिकांश बाबु आमा, छोरा,
नेपालीलाई खान कुनै बहाना चाहिँदैन। कहिले के कहिले के हरेक पर्वको नाममा नेपालीले खाने गरेको देखेर धरहरा पनि छक्क परेको छ। शुक्रबार हिन्दँहरूका आस्थाका केन्द्र भगवान् शिवको आराधना गर्ने दिन।
अहिले बजारमा राजदूतमा सिफारिस पर्नेले दलका नेताहरूलाई बिटो बुझाएको कुरा चर्चामा आइरहेको छ। मनपरी ढंगले राजदूत सिफारिसमा परेका कारण यस्तो अवस्था आएको भन्ने धरहरालाई लागेको छ। यो अवस्थाले गर्दा राजदूतमा
कस्तो पारा ?
स्थानीय निर्वाचनको तिथि घोषणा भएपछि अहिले पक्ष र विपक्षमा कुरा उठिरहेको धरहराले देखेको छ। पक्षमा हुनु त ठीकै हो, विपक्षमा जानुपर्ने कारणचाहिँ के होला भनेर धरहरा वरपर कसैले बुझेको पाइएको
सिंहदरबार चाहिने नचाहिने निर्णय गर्छ। उसले गरेको निर्णय लागू भए यो देश स्वर्ग नै हुने थियो कि भन्ने धरहरालाई लागि रहेको छ। सरकारले मुलुकमा प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र घोषणा गरेको पनि
राजदूतको योग्यता ?
राजदूत हुन के कस्तो योग्यता चाहिन्छ? के के काम गरेका व्यक्ति राजदूत हुन्छन्? यो आम मानिसको चासोको विषय हो। धरहराले पनि राजदूतको योग्यताको बारेमा चासो राख्दै आएको थियो। सरकारले सोमबार
देशमा अब चुनाव पनि नहोलाजस्तो भइरहेको छ। त्यसको चिन्ता सायद प्रधानमन्त्री पुकदालाई पनि भइरहेको होला भन्ने धरहरालाई लागेको छ। धरहरा वरपरकाहरू पनि प्रमको अहिलेको अवस्था हेरेर निकै चिन्तित भएको यसले
जहाँ गयो उहीं ठिक्क
नेपालका नेता जुन ठाउँमा पुग्यो त्यही ठाउँलाई सुहाउने कुरा गर्न खप्पिस भएको धरहराले लामो समयदेखि देख्दै र सुन्दै आएको छ। नेताहरू गर्न केही नसक्ने तर जहाँ गयो त्यहींका मानिसलाई प्रभाव
‘छोरो पाउनु कहिले कहिले भोटो सिउनु अहिले’ भन्ने उखानको चरितार्थ फुली लगाउन नपाएका एक आईजीले गरेका छन्। बल्ल बल्ल देउवा दाइको आशीर्वाद पाएर नेपाल प्रहरीको आईजीपीमा बढुवा भए पनि सर्वोच्च
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्डको पारा देखेर पनि कहिलेकाहीं दिक्क लाग्छ। कहिले के भन्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ? जहाँ गयो त्यहीं चुनाव हुन्छ भन्दै हिँड्नुहुन्छ। तर, चुनावको मितिचाहिँ कहिल्यै घोषणा गर्नेचाहिँ होइन। कहिले
जात्रा जो जारी छ
संविधान निर्माण गर्न मिलेका दल अहिले आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्। रातदिन बाझाबाझ गर्न तम्सिएका छन्। वादविवाद प्रतियोगितमा प्रथम हुने होडबाजी जारी छ। हरेक दिनजसो झगडा गर्न माहिर दलहरू समस्याको समाधान
अहिले बजार नेपाल प्रहरीको आईजीपी प्रसंगले तातेको छ त्यही भएर धरहरा पनि केही दिन यता यही प्रसंगमा केन्द्रित हुँदै आएको छ । सरकार आईजीपी नियुक्त गर्ने अदालत रोक लगाउने अनि
देउवाको एम्बुसमा प्रचण्ड
आइजीपी नियुक्ति प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लिएको अडानलाई देखेर उहाँलाई नेपाली कांग्रेसको होइन नेपाली कांग्रेस सुदुरपश्चिमको नेता भन्नुपर्ने हो कि भनेर धेरै रनभुल्लमा परेको धरहराले
आइजीपी को होला ? अहिले जनस्तर र पार्टी कार्यकर्ताहरूमाझ यो प्रश्न निकै उठिरहेको धरहराले चाल पाएको छ। यसले सुने अनुसार आज आइतबार बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यसबारेमा निर्णय गर्ने संभावना छ।